Suuqleyda Weyn iyo Suuqleyda Xun
Waxaan ku kaxeynayay dhinaca Galbeed ee magaalada, waxaan eegay boodh, waxaana ku qornaa boorar loogu talagalay qalabka. Halkii boorarku uu noqon lahaa xayeysiis caadi ah, xayaysiintu waxay u sii socotay dhulka. Gacan ayaa kor u kacday boostada qalabkii dhabta ahaana wuxuu ku jiray aagga boorarka. Waxay umuuqatay in cududdii ay dhulka ka soo baxayso. Haddii aan u baahanahay dubbe, waxaan u maleynayaa in aan xasuusto sumadda oo malaha, waan iibsan lahaa.
Internetka, waan ku qanacsanahay helitaanka xayeysiinta ku habboon markaan raadinayo. Xaqiiqdii waxaan ku kalsoonahay xayeysiiyaha sameynta cilmi baarista keyword sare, i raadinta, iyo ii soo bandhigida xayeysiis ku habboon inta aan ku sameeyo Google oo i siinaya natiijo ku habboon.
Waxaan jecelahay inaan siiyo xayeysiiyaasha tanno macluumaad shakhsi ah. Waxaan u sameeyaa si ay sifiican iila fahmaan oo ay i siiyaan xayeysiis u dhigma tira-koobkayga. Waxaan rabaa xayeysiis smart. Waxaan rabaa xeelado suuq geyn caqli badan. Weli waan jeclahay suuqgeyn hal abuur leh ama olole xayeysiis ah oo awood u leh inuu i ceyriyo, soo jiito dareenkeyga, oo iga dhigo inaan farta ku dul jiito jiirkaas.
Ma keligay baa? Waxaan wax uga iibsadaa wax walba oo khadka tooska ah hadda ah. Haddii aanan waligey booqan dukaan kale intaan noolahay, ma aanan booqan lahayn. Marka aan arko xayaysiis oo aan diyaar u ahay inaan iibsado, waan ku boodaa. Waan jeclahay suuq geynta waana jeclahay xayeysiinta.
Waxaan rumeysanahay in suuqgeynta iyo xayeysiintu ay helaan kufsi xun suuqleyda caajiska ah awgood. Halkii ay khatar gelin lahaayeen hal-abuurnimada ama ay samayn lahaayeen dadaal dheeraad ah oo dheeraad ah si loo shakhsiyeeyo oo loo bartilmaameedsado, waxay si fudud ugu xoqaan maskaxdooda horteeda indhoolayaasha indhaha inta ay awoodaan.
Suuqgeyaasha waaweyni waxay awoodaan inay gartaan jihada aad u socoto, haddii aad u socotid jihada ay ku socdaan, waxay kuu horseedi doonaan si sax ah. Waxay la mid tahay kalluumeysiga duullimaadka… kalluunku wuu gaajaysan yahay isla markaana sasabashada ayaa ku soo kordheysa iyaga iyo in ka badan ilaa ay ka fogaan karto qaniinyada. Suuqleyda aadka u xun ayaa si fudud shabaqa u tuura. Ma heli karaa horseedyo kugu filan? Shabakad ka weyn! Wali ma awoodo? Shabakado badan! Waxay jiidaan kalluunkooda inta ay halgamayaan oo ay neefta ka baxayaan si ay uga baxaan.
Adiguna see tahay? Weli miyaad qadarinaysaa suuq geyn weyn iyo xayeysiin?
Tags: boorxayeysiiska biilashacilmi-baarista muhiimka ahxayeesiinta internetkaraadraaca
Jul 2, 2010 markay ahayd 7:38 AM
Waa suuqgeynta ugu wanaagsan uguna hal abuurka badan ee aan xasuusto. Waxaan u janjeera inaan dib u habeeyo inta hartay maxaa yeelay waxay noqotay wax aad u xun.
Jul 2, 2010 markay ahayd 7:48 AM
Si daacad ah ayaan u dhihi karaa kuma qanacsana xayeysiinta weyn, iyadoo aan loo eegin sida loo bartilmaameedsanayo. Xaqiiqdii, inta xayeysiistaha ah uu isku dayo inuu i bartilmaameedsado, inta badan waan ka noqdaa. Waa khibrad la mid ah adeegsiga alaabooyin badan oo Microsoft ah: waxay aad isugu dayaan inay saadaaliyaan waxa aan doonayo (fiiri, autoformatting!), Laakiin iyagu shaqo fiican kama qabtaan.
Isla sidaas ayaa loo sameeyaa xayeysiinta astaanta taas oo halkii laga rabay inay ku dhiirrigeliso iib toos ah, isku daydo inay abuurto xaalad la xiriirta astaanta. Marka ugu fiican ee aan waxtar lahayn, ugu xumaa khiyaanadeeda.
Aniga ahaan, xayeysiiyayaashu waxyeello intaa ka badan ayey u gaystaan ​​summaddooda markay xayeysiinayaan. Waxaan dareemayaa sida ay isku dayayaan inay wax yar khiyaaneeyaan. Iyo qoto dheer, waxaan u maleynayaa in dadka intooda badani ay dareemaan isku mid. Waxay ku iibsadaan alaab xayeysiiyayaal si cilad leh, laakiin waxay doorbidayaan inay wax ka iibsadaan noocyo daacadnimo iyo hufnaan badan leh markay waxyaabo kale jiraan
Waxaan u maleynayaa inay ku adag tahay warshadaha xayeysiinta inay aqbalaan, laakiin leh marinno iyo teknoolojiyad badan oo hadda loogu talagalay inay u adeegaan xayeysiinta, qiimaha dhammaan xayeysiiska ayaa hoos u dhacaya; xitaa kuwa "wanaagsan".
Jul 2, 2010 markay ahayd 8:12 AM
Deckerton, waa aragti weyn! Waan xiiseynayaa, in kastoo, intee in le'eg oo suuq-geyn iyo xayeysiin ah oo aad markhaati ka tahay adiga oo aan xitaa ka warqabin in si xeeladeysan lagula socodsiiyey!
Jul 2, 2010 markay tahay 12:43 PM
Waan kula jiraa, Doug! Waan ku qanacsanahay markay xayeysiintu ku habboon tahay dookhayga oo aan ku qabsado indhahayga siyaabo hal abuur leh. Xaqiiqdu waxay tahay, waxaan iibsadaa waxyaabo… iyo xayeysiinta wanaagsan waxay ii sahlaysaa inaan ku xirnaado alaabooyin aniga ila quseeya.